Kooxda Xallinta: Ka-faa'iideysiga AI iyo NLP ee Cilmi-baarista Suuqa | Martech Zone
Jimco, Oktoobar 30, 2020 Jimco, Oktoobar 30, 2020 Douglas Karr
Haddii aad waligaa soo saartey daraasad oo aad rajeyneysay inaad ka heshid natiijooyin tiro iyo tayo leh jawaabaha, waad fahantay sida ay u adagtahay ereyga su'aalaha. Ereyga, qaabdhismeedka, iyo naxwaha aad weydiisato waxay kuu horseedi karaan natiijooyin u horseedi doona cilmibaaristaada marin habaabin.
Maadaama aan ahay maamule wax soo saar, waxaan inbadan ku soo dhex dhacay kooxaha xallinta. Haddii aan tijaabin lahaa adeegsade cusub oo adeegsade ah, weydiinta jawaab celinta waxay ka dhigi kartaa qofka qaata inuu ku dhufto interface-ka si uu isugu dayo inuu wax qaldan u helo… iyadoo ay xaqiiqda tahay in si fiican loo qaabeeyay. Haddii aan waydiiyo inay wax adag yihiin ama haddii wax ka maqan yihiin, isticmaaleha ayaa isla markaaba raadinaya dhibaato… laga yaabo inaanay jirin.
Taabadalkeed, waxaan kaliya ka codsanay isticmaale inuu ficil sameeyo ka dibna sharaxo sida ay wax uga qabanayeen ficilka. In kasta oo tani meesha ka saartay wixii eexasho ah, waxay u baahan tahay falanqayn badan oo boostada ah si loogu qiyaaso natiijooyinka fikrado tayo leh ama talooyin. Natiijooyinkaasi badanaa waxay ahaayeen weli qiyaasta ugu fiicanA maahan a gunaanad xisaabeed sax ah.
Sidee Loogu Shaqeeyaa Luuqada Dabiiciga ah iyo Barashada Mashiinka
Qaar ka mid ah kuwa ugu qanisan, aragtiyaha isbeddelka badan waxay ka yimaadaan weydiinta su'aalaha dhammaadka furan. maxaad waa tusaale fiican. Laakiin jawaabta sababta maahan tiro, laba-labo, ama ikhtiyaar jawaab… markaa had iyo jeer way adkeyd in la helo natiijooyinka tiro iyo tayoba leh ee aad uga baahan tahay weydiinta su'aalaha furan ee kugu hagaya go'aannada ganacsiga.
Mahadsanid, farsamaynta luqadda dabiiciga ah (NLP) iyo barashada mashiinka (ML) way ka gudbi kartaa arimahan! Isku darka barashada mashiinka iyo sirdoonka dadka, KooxdaSolver waa madal tiknoolajiyad cilmi baaris suuqeed ah oo adeegsata sirdoonka macmalka ah si loo waydiiyo loona xoojiyo tayada iyo sidoo kale su'aalaha tirada ee sahannada internetka.
GroupSolver wuxuu udhaxeeyaa aaladaha iskudhiska ah, sida Survey Monkey iyo Google Surveys, iyo shirkadaha cilmi baarista oo buuxa, sida McKinsey & Company iyo Accenture.
Waxa kala soocaya GroupSolver waa qaabkooda ku wajahan ka shaqeynta jawaabaha luuqada dabiiciga ah, iyagoo adeegsanaya:
Caqliga Dadka - Jawaab bixiyaashu waxay uga jawaabaan su'aalaha furan dhammaantood ereyadooda, ka dib way iskaashadaan.
Barashada Mashiinka - Jawaabaha su'aalaha furan dhammaantood waxaa lagu farsameeyaa istiraatiijiyad firfircoon oo is-cabbiris leh.
Istaatistikada Horukacsan - madashu waxay ansaxineysaa jawaabaha luuqada dabiiciga ah waxayna tiraahdaa fikradaha tayada.
Qalabka GroupSolver Ku dar
Jawaabaha Furan ee AI ™ - Iyadoo la isku darayo barashada mashiinka iyo sirdoonka dadka, GroupSolver wuxuu si otomaatig ah u abaabulaa una tiriyaa jawaabaha furan. Ma jiro tababar xog ah, mana jirin dhexdhexaadin bini'aadam ah, iyo lambar sir ah oo bilaash ah looma baahna.
Kooxda Fikradda ™ - IdeaCluster waxay muujineysaa isku xirnaanta udhaxeysa shaqsiyaadka jawaabaha furan. Aad ayey waxtar u leedahay marka la dhisayo qofka macaamiisha ah ama aad u sheegeyso sheeko magac leh. Taasi waa sax - GroupSolver la xoreeyay isku-xirnaanta iyo moodooyinka dib-u-celinta ee xiriirka gaarka ah ee xogta tirada.
IntelliSegment ™ - IntelliSegment waa aalad caqli kala soocid ah oo kaa caawin karta inaad fahanto sida jawaabaha su'aalaha furan ay ugu kala duwan yihiin qaybaha jawaabeyaasha gaarka ah. Waxay la mid tahay inaad sheeko ka helayso meel guntin lagu haysto.
IdeaCloud ™ - IdeaCloud waa iswaafajin iyo mudnaan la soo bandhigo jawaabaha ugu taageerada badan su'aasha furan. Far waaweyn ayaa tilmaamaysa jawaabaha iyadoo jawaabta la siinayo ay ka sareyso jawaabeyaasha. Font yar ayaa loogu talagalay… si fiican, jawaabaha aan si fiican u qaban.
Xalka Wadajirka ™ - Xalka Isku-raacku waa jawaabo si aad ah loo taageeray oo si togan isugu xidhan. Waxay muujineysaa jawaabaha si wanaagsan u wada socda oo ka dhigaya heshiis la isku raacsan yahay jawaab bixiyaasha.
Jawaabaha doorashada - Ka sokow inay tahay rootiga iyo subagga cilmi baarista, jawaabaha su'aalaha xulashada badan waxay ku caawin karaan dhisida qaybaha jawaabeyaasha si loo helo aragtiyo hodan ah. Waxaan ka dhigeynaa kuwo cusub oo cusbooneysiiya waqtiga-dhabta ah.
Xog Soo Dejiye - Haddii aad horey u soo ururisay macluumaad ku saabsan jawaabeyaashaada, waxaad ku shubi kartaa dashboard-keena. U adeegso si aad u gooyso xogta KooxdaSolver ama aad u dhisto qaybo jawaab-bixiyeyaal cusub.
Jawaab Maareeye - Daawo sida jawaabeyaashu uga jawaabaan su'aalahaaga waqtiga dhabta ah. Kooxi oo ku ansax iyaga oo gujinaya badhan. Waxaan ku kalsoonahay mashiinkeena, laakiin xogta mararka qaar waxay ubaahantahay taabasho bini aadam dabacsan.
Xog Degdeg ah - Dhoofinta xogta ceyriinka ah ee falanqeyn dheeri ah oo leh softiweerka tirakoobka ee caadiga ah sida SPSS, R, ama Excel.
Khariidadda muuqaalka ee 'GroupSolver' waxay u saamaxdaa isticmaaleyaasha inay arkaan oo ay la shaqeeyaan fikradahaaga. Xogta waa la farsameeyaa oo waa la cusbooneysiiyaa markii la aruurinayo, sidaa darteed waxaad ku eegaan kartaa natiijooyinka waqti kasta.
Codso Dembi-wadaha Groupsverver
Tags: aisirdoonka macmalkooxocilmi baarismadal cilmi baarista suuqamlfarsamaynta luqadda dabiiciga ahnlp